नङको सेतो भागबाट मानिसको स्वास्थ्य थाहा पाउन सकिन्छ – MEDIA DARPAN
नङको सेतो भागबाट मानिसको स्वास्थ्य थाहा पाउन सकिन्छ
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २४ कार्तिक २०७७, सोमबार १२:००
हिसाबप्लस । काठमाडौ । हातमा रहेको रेखा हेरेर मानिसको भविष्य हेर्ने गरीन्छ तर हातको नङ हेरेर पनि भविष्यवाणी गरीन्छ भन्दा तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । यति मात्र हैन हातको नङ हेरेर हाम्रो स्वास्थ्य पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
हातको फेदमा प्राय सबैको अर्ध चन्द्रमा बनेको सेतो भाग हुन्छ । यसलाई लेटिन भाषामा लुनुला भनिन्छ भने नेपालीमा अर्ध चन्द्रमा भन्ने पनि गरीन्छ । यसलाई चीनको परम्परागत मान्यता अनुसार यसलाई स्वास्थ्य नाप्ने ब्यारोमिटरको रुपमा पनि लिने गरीन्छ । यदि तपाईको स्वास्थ्य ठिक छैन भने नङको सेतो भाग देखिदैन तर स्वास्थ्य ठिक छ भने हातका सेता भाग पुन देखिन थाल्दछ ।
सामान्य अर्ध चन्द्रमा
यदि तपाईको १० वटा औलामध्ये ८ वटा औलाको नङको अर्ध चन्द्रमा सेतो छ भने तपाईको स्वास्थ्य एक दम ठिक छ । तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन ।
अर्ध चन्द्रमा कम हुदैछ
यदि तपाईको हातको अर्धचन्द्रमाको निसाना हराउँदै गएका छन् र बुढी औलामा मात्र निसाना छ भने स्वास्थ्मा समस्या देखा परेको छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ । मेडिकल एक्सपर्टको अनुसार अर्ध चन्द्रमाले अन्य किसिमका रोगकोबारेमा पनि जानकारी दिने गर्दछ ।
शरीरमा आवश्यक आईरनको मात्रा कम भएमा थाईराइड वापिटुईअरी ग्लाड जस्ता रोग लाग्न सक्छन् । त्यसैले नङमा रहेको यस अर्ध चन्द्रमालाई वेलावेलामा ख्याल गरीरहनुपर्दछ ।
पुदिना पेटको साथै अन्य धेरै रोगहरुको अचुक औषधि
दाइने कोल्टो फेरेर सुत्नुहुन्छ, त्यसोभए देब्रे कोल्टो फेरेर सुतनुहोस, यस्तो छ फाईदा
कैलालीमा थप ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
थप कडाइ गर्नेगरी उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थप ! के-केमा कडाइ ? हेर्नुहोस् !